मसंग केही सासदहरु चुनाव हारेका विपक्षीले मेरो खैरो खन्यो - सांसद हरिनरायण रौनियार - Yatra Daily
Home बिचार/अन्तर्वार्ता मसंग केही सासदहरु चुनाव हारेका विपक्षीले मेरो खैरो खन्यो – सांसद हरिनरायण...
मसंग केही सासदहरु चुनाव हारेका विपक्षीले मेरो खैरो खन्यो – सांसद हरिनरायण रौनियार
मैले त्यो संस्था आफ्नो छोरालाई हस्तानान्तरण गरि दिएको छु । त्यो संस्थामा म छैन । तर त्यो संस्थामा कुनै आँच आउँछ, गलत आरोप लाग्छ भने मलाई पिडा नहुने हो त ? हैन नी जबकी पप्पु कन्ट्रक्सनलाई मैले ३४ वर्ष चलाएको छु । मैले जन्माएको संस्था हो गलत आरोप लगाएपछि म कसरी हेरेर बस्न सक्छु ?
१) विकास निर्माणको कामलाई लिएर अहिले तपाई माथि आईरहेको आरोप बारे यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यो सबै एउटा मप्रतिको षडयन्त्र हो । मसंग केही सासदहरु चुनाव हारेका छन् । वहाँहरु जितेर के–के गरे त्यो सबै जनताले देखिसकेका छन् । मैले पटक पटक आमसभा र मिडिया मार्फत अवाज उठाउँदै आएको कुरा हो । तपाईहरु १०–१५ वर्ष सांसद भएर बस्नु भयो के गर्नुभयो ? म निर्वाचित भएको छु मलाई काम गर्न दिनुु्, गरेन भने फेरी जनताले तपाईहरुलाई अर्काे चुनावमा जिताएर बोलाई हाल्छन् । तपाईहरु यत्रो वर्ष बस्नुभयो कसैले त केही बिरोध गरेनन् मेरो खैरो किन खन्नुप¥यो ! राजनीतिक रुपमा कुनै खोट नपाएर व्यक्तिगत, पारिवारिक र मैले छोडीसकेको व्यवसायीक काममा प्रभाव पारेर मलाई बदनाम गराउने कोशिस गर्दैछन् ।
मलाई बदनाम गर्ने सुरुवात मसंग लडेका जिल्लाका सांसदहरुले गरे । त्यसको बलमा केही प्रलोभनमा परेका मिडियाहरुले हाम्रो विरोधमा लेखे तर बुझनुपर्छ कसैको व्यक्तिगत जीवनसंग जोडेर अरुको लागी खाल्डो खन्दा आफै खाल्डोमा परीन्छ । यो समान्य सिद्धान्त प्रकृतिले दिएको हो । मलाई विश्वास छ कि एक न एक दिन वहाँहरु मेरो कामको प्रसंशा गर्नुहुन्छ । किन भने मैले अब मेरो आफ्नो जीवन जनताका लागी समर्पित गरेको छु त्यसकै लागी गुणस्तरीय र दिर्घकालिन विकासमा लागेको छु ।
२) नढाटी भन्नुहोला, हिजोको दिनमा यहाँले नेतृत्व गरेको संस्था पप्पु कन्ट्रक्सनसंग जोडेर विभिन्न कुराहरु आउनु यहाँको विचारमा नाकारात्मक हो कि सकारात्मक हो ?
मैले त्यो संस्था आफ्नो छोरालाई हस्तानान्तरण गरि दिएको छु । त्यो संस्थामा म छैन । तर त्यो संस्थामा कुनै आँच आउँछ, गलत आरोप लाग्छ भने मलाई पिडा नहुने हो त ? हैन नी जबकी पप्पु कन्ट्रक्सनलाई मैले ३४ वर्ष चलाएको छु । मैले जन्माएको संस्था हो, जसले मेरो ईज्जत, प्रतिष्ठा, मानमर्यादा बढायो त्यो संस्थालाई गलत आरोप लगाएपछि म कसरी हेरेर बस्न सक्छु ? कोही बिजनेस गरेर खान्छ, कोही खेतीपाती र कोही दैनिक ज्याला मजदुरु गरि । मेरो घरपरीवार कन्ट्रक्सनको काम गरेर खान्छ । मैले त को कस्तो चरित्रको छ, को कहाँ के गर्छ कसैलाई केही भनेको त छैन नी ! मेरो बारेमा किन भन्नुप¥यो ।
३) विकासका कुरा गर्नु हुन्छ, तपाई नै पप्पु कन्ट्रक्सनको प्रमुख हुदाँ पर्सा जिल्लामा यहाँले नै लिएको ठेक्काहरु हालसम्म पुरा भएको छैन्, यस अवस्थामा तपाई आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नु हुन्छ भनेर के ग्याराण्टी छ ?
सबै काम आफ्नो गतिले भईरहेको छ । म प्रमुख भए या अरु नै कोही, काम आफ्नो समयमा हुन्छ कामको एउटा समय र फ्रेम हुन्छ । विस्तारै विस्तारै समस्या हल हुदै जान्छ । काम गर्ने बेलामा विभिन्न बाधा व्यवधानको समस्याको साथै राज्यले दिएको पैसाको भुक्तानी नदिएर पनी ढिला भएका हुन्छन् । रहयो कुरा मेरो क्षेत्रको मैले यसअघि नै भनिसके मेरो जीवन अब कन्ट्रक्सनका निम्त हैन् राजनितिका लागी हो । जनता मेरो भगवान हुन, मेरो क्षेत्र मेरो लागी सबै कुरा हो । म आफ्नो जीवनलाई जनताको हित र विकास प्रति समर्पित गरेको छु समय र स्वास्थ्यले साथ दिए त्यो गरेर देखाउँछु ।
४) यहाँले पुरै जीवन राजनीतिमा समर्पित गर्ने भन्नुहुन्छ ? राजनीतिले ठुलाठुला एस आराम त दिदैन जनतामाझ पुग्नुपर्छ त्यसका लागी के गर्नुहुन्छ ?
एस आराम त पहिला म जहाँ काम गर्थे त्यहाँ थियो । एस आराम राजनीतिमा कहाँ हुन्छ । र एस आराम गर्ने मेरो चरित्र छैन । म अहिले जुन गतिमा छु त्यस्तै रहन्छु । राजनीतिमा जनताको सेवा र विकास गर्नको लागी आएको छु । जनतासंग सधै नजिक भएर जनताको दुःख, सुख चिन्तनमा समर्पित हुन्छु मेरा लागी अब यही एस अराम रहनेछु ।
५) ईमन्दारीपुर्वक भन्दा अहिले तपाई सांसदमा निर्वाचित भईसकेपछि यहाँले जनताको मन कतिको जित्न सफल हुनु भएको छ ?
निर्वाचनको बेलाभन्दा बढि नै अहिले जनताको मन जित्न सफल भएको छु । त्यस क्षेत्रका जनताहरु म बाट ठुलो अपेक्षा राख्नु भएको छ, सन्तुष्ट हुदै गएका छन् किनभने, हरेक १५/१५ दिनमा पालो पालो गरि जनतासंग भेटघाट गर्नुको साथै उनीहरुको दुःख सुख सन्ने गर्छु, उनीहरुको लागी चिन्तन गर्छु र त्यस क्षेत्रको जनताको विकासको लागी विभिन्न योजना परियोजनाको बारेमा छलफल गर्नेदेखी योजनाबारे जानकारी गराईरहेको हुन्छु ।
६) यहाँको पार्टी सरकारमा गएको छ, यससंगै सहिद परिवारलाई विर्सेको देखिन्छ । अहिलेको यो समयमा २०७२ सालमा आन्दोलन हुँदै थियो सहिद भईरहेका थिए तिनिहरुलाई फोरमले सम्झेका छैनन् । के यहाँको पार्टी सत्ताको लागी मात्रै हो ? मेरो मात्र हैन अरुको पनी आरोप छ, यो आरोपलाई यहाँले कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?
यो दुस–प्रचार हो । सत्ता र सरकारमा नगई विकासका कुराहरु हुनै सक्दैन । त्यसको लागी सत्तामा पुग्नु पर्छ । सत्तामा पुगेपछि संघीय प्रंणालीको चुनाव हुन्छ र त्यसमा निर्वाचन भएर सरकार बन्छ । प्रतिपक्षमा बसेर आलोचना मात्र हुन्छ, विकास हुदैन । र हामी सरकारमा जादैमा सहिद परिवारलाई विर्सेका छैनौँ योग्यता र क्षमता अनुसार सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गरिरहेको छ । उनीहरुको बालबच्चाहरुलाई निःशुल्क पढाई लेखाई लगायतका सेवा सुविधा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनी गरिरहेका छन् ।
७) अब केही फरक प्रसङ्ग, वर्षदिन हुन लाग्यो अहिले केन्द्र र प्रदेश सरकार बिचमा अझै बेला बेलामा असमझदारी देखिन्छ । यस्तो किन भएको होला ? कहिले देखि सबैको समन्वयमा देशमा विकास हुन्छ ? अनि प्रदेश सरकारका मन्त्री धर्ना नै गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के ?
संघीय सरकारले कानुन बनाईरहेको छ भने प्रदेश सरकारलाई काम गर्न हतारो भईरहेको छ । संघीय सरकारले कानुन बनाएर दिएपछि मात्र प्रदेश सरकारले काम गर्ने हो । जब कुनै पनि नयाँ संरचना खडा हुन्छ, त्यसमा अलिकति अफ्ठ्यारो हुन्छ नै ! घर नै बनाउँदा त्यसमा सबै कुरा त मिल्दैन । घर बनाएर त्यसलाई सजाउन केही समय लाग्छ । त्यस्तै अहिले भईरहेको छ । अर्काे विकास भनेको निरन्तर भईरहने प्रकृया हो । विकासको क्रम जारी रहन्छ । मलाई लाग्छ केही वर्षमै यहाँ धेरै राम्रा कुराहरु देख्न पाईन्छ ।
८) पर्सा जिल्ला खास गरि यहाँको क्षेत्र यतिका वर्षसम्म विकास हुन नसक्नुको कारण यहाँको विचारमा के पाउनु भएको छ ?
मेरो क्षेत्र विकास हुन नसक्नुको कारण एउटै हो त्यो हो, राजनितीक नेतृत्व र राजनीतिक गर्ने निर्वाचित संसदहरुको कमी कमजोरी । हैन भने तिनिहरुले चाहेको भए मेरो क्षेत्रले विकास गर्न सक्थे ।
नाम : हरि नरायण रौनियार
ठेगाना : पोखरीया नगरपालिका सतवरीया
हाल : वीरगंज महानगरपालिका पानीटंकी
राजनितिक यात्रा : नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको प्रेरणाबाट २०३६ साल देखी नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध भई
हाल : वि.सं. २०७४ सालमा समपन्न निर्वाचनमा संघिय समाजवादी फोरम नेपालमा पार्टी प्रवेश गरी सांसदमा निर्वाचित
Previous articleठाराब क्याम्पसमा ताला बन्दी तथा तोडफोड गर्नेलाई कारवाही गर्न माग,भर्ना हुन आउँने विधार्थीहरु फर्किन बाध्य
Next articleजब्दिघाटको त्रुटी ढाकछोप गर्ने सडक विभागको चाल : पप्पुलाई दबाब दिन मिडिया हतियार ?